MM Popular – Page 10 – News And Videos
” လူကြီးတွေ အတင်းစီစဉ်တာပါ ဆိုတဲ့ မြန်မာပြည်က အဝင်း ” အ၀င်းနဲ့နန်းစုဦးတကယ်ပဲလက်ထပ်လိုက်ကြတာလားဆိုတာ……. (အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ။)
တကျတူးတှနေဲ့ သူကိုမှ ကွှပေါတယျဆိုတဲ့ ပြိုမဒီလေးတှအေတှကျ ကတော့ မွနျမာပွညျက အဝငျးကို လညျး မထေ့ားလို့ မရပါဘူးနျော။ယနောကျပိုငျး လူမှုကှနျယကျမှာရော အနုပညာ လမျးကွောငျးပျေါ မှာပါ နာမညျကွီး ရပေနျးစားလာတဲ့ မွနျမာပွညျအဝငျးချေါ Tyron Bejayကတော့ ပရိသတျတှကေို ဟာကနဲ ဟငျခနဲ အံ့သွသှားအောငျ လုပျလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မငျးသမီးခြော လေး နနျးဆုဦးနဲ့ အတူ မင်ျဂလာစုံတှဲပုံလေးတှေ တငျခဲ့ပွီး စာလေးတဈကွောငျး တငျခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှေ အံ့သွမှငျသကျ သှားခဲ့ရတာပဲဖွဈပါတယျ။ ဘုရား ဘုရား တူမလေးရေချိူးနေတုန်း ဦးလေးဖြစ်သူမှ မတရားပြုကျင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဗွီဒီဖိုင်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား …
“လှိုင်သာယာမှာ ပွဲကျအောင်ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ စွမ်းဇာနည်” သရုပ်ဆောင်မင်းသားချော စွမ်းကတော့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသဲစွဲ ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘယ်ရောက်ရောက်လူချစ်လူခင်များနေတော့တာပဲ အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ-
ဇာတျသဘငျရော အနုပညာလောကမှာပါ ပိုငျနိုငျတဲ့ မငျးသားတဈလကျဆိုရငျတော့ ကြျောကြျောဗိုလျ ပွီးရငျ စှမျးဇာနညျတဈယောကျလညျး ပါဝငျပါတယျ။ စှမျးဟာ ယနခေ့တျေ မွနျမာ့ဇာတျသဘငျလောကမှာ ပရိသတျအမြားဆုံးရရှိထားတဲ့ မငျးသားတဈလကျဖွဈပါတယျ။ ဘုရား ဘုရား တူမလေးရေချိူးနေတုန်း ဦးလေးဖြစ်သူမှ မတရားပြုကျင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဗွီဒီဖိုင်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးနဲ့စိုင်းစိုင်းခိုင်းလှိုင် ဟိုတယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးကြပြီ…..မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG သဇင် ကိုအရှေ့ကနေ ကုန်းခိုင်းပြီး .. ဘဲကြီးကနောက်ကနေ စပါယ်ရှယ်ဆောင့်ပေးနေတာ ကြမ်းသလားမမေးနဲ့….အောကားကောင်းလေး…မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်ထားလိုက်နော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရားဘုရား ဟိန်းဝေယံနဲ့စိုးပြည့်သဇင် ပြင်ဦးလွင်ပန်းခြံထဲမှာ မဖွယ်မရာပြုလုပ်နေတုန်း ချောင်းရိုက်ထားတာတဲ့…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို …
“ဝေဖန်သူတွေကို ဒဲ့ပဲဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ဒိန်းပိုပိုဒေါင်” မိန်းမသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ အရှက်နဲ့သိက္ခာကိုမငှဲ့ပဲ အမှန်တရား အတွက် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပေမယ့် နာမည်ကြီးချင်လို့ လုပ်တာ ဆိုတဲ့……… (အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ။)
ပရိသတျတှအေားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး နိုငျငံကြျောဟာသ သရုပျဆောငျဦးဒိနျးဒေါငျရဲ့ သမီးဖွဈသူဒိနျးပိုပိုဒေါငျ ကတော့ဗဒေငျဆရာအောငျခဈြပို ကိစ်စနဲ့ပတျသတျပွီး မတရားအနိုငျကငျြ့စျောကားခံနရေ တဲ့အမြိုးသမီးတှေ ဘကျရပျတညျကာ သူမကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အဖွဈအပကျြတှကေိုရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ ထုတျဖျောပွောကွားခဲ့ တာပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့လိုသူမထုတျဖျောပွောကွားခဲ့တဲ့ အပျေါတဈခြို့သောပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျမှုတှကေိုလညျးခံနရေပါတယျ။ နာမညျကွီးခငျြလို့ လုပျတာပါဆိုတဲ့ ပရိသတျတဈခြို့ရဲ့ စကားသံတှအေပျေါ သူမကတော့အခုလို့ပဲ ပွောပွလာ ခဲ့ပါတယျ။ 1 ဘုရား ဘုရား တူမလေးရေချိူးနေတုန်း ဦးလေးဖြစ်သူမှ မတရားပြုကျင့် လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ဗွီဒီဖိုင်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးနဲ့စိုင်းစိုင်းခိုင်းလှိုင် ဟိုတယ်မှာ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးကြပြီ…..မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ကြိုက်သလိုပြော…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG သဇင် ကိုအရှေ့ကနေ ကုန်းခိုင်းပြီး .. ဘဲကြီးကနောက်ကနေ စပါယ်ရှယ်ဆောင့်ပေးနေတာ …
“ရွှေတိဂုံဘုရားကို မိသားစုလိုက် ဘုရားလားဖူးတဲ့ မိုးဟေကိုတို့မိသားစု” မိုးဟေကိုတို့မိသားစုကတော့ ပျော်စရာ၊ကြည်နှုးစရာကောင်းတဲ့.. (အပြည့်အစုံဖတ်ရန်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
1 Oh My God ! မိုးဟေကိုရဲ့ HDအပြာကား ကြည့်ပြီးကြပြီလား.. နှိပ်သာကြည့်လိုက်ပါ လုံးဝကြွေသွားလိမ့်မယ်။မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ အသက် ၁၃ နှစ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်က ၅ လရှိနေတဲ့ ကျောင်းသူလေး သားသမီးကို ည စာကျက်ဝိုင်းမှာ ထားတဲ့ ကျောက်းသားမိဘများ သတိထားစရာ (Share ပေးပါ)……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား အမျိုးသမီးများ တစ်ကိုယ်ရေ ဆန္ဒဖြေဖျောက်ခြင်း၏ အကျိုးအသက်များတဲ့ (ကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှဖတ်ပါ )……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းနဲ့ ဟိန်းဝေယံတဲ့ ထင်တောင်မထင်ထားဘူး။မယုံရင် ဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားစေရမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ သရုပျဆောငျမိုးဟကေိုတို့မိသားစုကတော့ တဈမိသားစုလုံးတပြျောတပါးကွီးနဲ့ ရှတေိဂုံဘုရားကို ဘုရားလာဖူးခဲ့ကွပါတယျ။ဒီဇငျဘာရဲ့ အခုလိုအေးခမျြးတဲ့ရကျလေးတှေ မိသားစုလိုကျဘုရားဖူးရတာလညျး …
ချစ်သူချောချောလေးကို ထပ်မံထုတ်ပြပြီး ကြွားလိုက်တဲ့ ရွှေမှုန်ရတီ
လူထုပရိသတ်အပေါင်းတို့ ရွှေမှုန်ရတီလေးပါသွားပြီနော်…..💕💕💕💕 ဘဲကြီးနာမည်က ထူးပိုင်အောင်ဆိုလားပဲ 1 Oh My God ! မိုးဟေကိုရဲ့ HDအပြာကား ကြည့်ပြီးကြပြီလား.. နှိပ်သာကြည့်လိုက်ပါ လုံးဝကြွေသွားလိမ့်မယ်။မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ အသက် ၁၃ နှစ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်က ၅ လရှိနေတဲ့ ကျောင်းသူလေး သားသမီးကို ည စာကျက်ဝိုင်းမှာ ထားတဲ့ ကျောက်းသားမိဘများ သတိထားစရာ (Share ပေးပါ)……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား အမျိုးသမီးများ တစ်ကိုယ်ရေ ဆန္ဒဖြေဖျောက်ခြင်း၏ အကျိုးအသက်များတဲ့ (ကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှဖတ်ပါ )……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းနဲ့ ဟိန်းဝေယံတဲ့ ထင်တောင်မထင်ထားဘူး။မယုံရင် ဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားစေရမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ရင်သားသေးလို့ …
” Rဇာနည်ပေါက်ကွဲနေတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်” တော်တော်လွန်ပါတယ် နောက်လူတွေလဲသိထားသင့်ပါတယ် .
1 Oh My God ! မိုးဟေကိုရဲ့ HDအပြာကား ကြည့်ပြီးကြပြီလား.. နှိပ်သာကြည့်လိုက်ပါ လုံးဝကြွေသွားလိမ့်မယ်။မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ အသက် ၁၃ နှစ်နဲ့ ကိုယ်ဝန်က ၅ လရှိနေတဲ့ ကျောင်းသူလေး သားသမီးကို ည စာကျက်ဝိုင်းမှာ ထားတဲ့ ကျောက်းသားမိဘများ သတိထားစရာ (Share ပေးပါ)……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား အမျိုးသမီးများ တစ်ကိုယ်ရေ ဆန္ဒဖြေဖျောက်ခြင်း၏ အကျိုးအသက်များတဲ့ (ကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှဖတ်ပါ )……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းနဲ့ ဟိန်းဝေယံတဲ့ ထင်တောင်မထင်ထားဘူး။မယုံရင် ဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားစေရမယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ကိုအာကြီးပြောပုံအရဆိုရင်တော့ ပရိသတ်ကြီူပါ ရှဲပေးလိုက်ပါဦးနော် ပရိသတျအားပေးခဈြခငျတဲ့ အဆိုတျော …
MRTV-4 ရဲ့ နာမည်ကြီး အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သဇင်နွယ်ဝင်းနဲ့ သူမရဲ့ချစ်သူအကြောင်းထွက်ပေါ်……ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ Presenter မမ သဇင်နွယ်ဝင်းတို့ စုံတွဲ”
1 Oh My God သင်ဇာဝင့်ကျော်အိမ်သာထဲမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာကြည့်လိုက် အံ့သြသွားစေရမယ်။18နှစ်ပြည်မှကြည့်ပါခင်ဗျာ…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ချစ်သူကို အလိုလိုက်မိတဲ့ ကျောင်းသူလေး ပြည့်တန်ဆာဖြစ်သွားပုံ အဆင့်ဆင့် (မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် Share ပေးပါ)…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ လူထုပရိသတ်အပေါင်းတို့ ရွှေမှုန်ရတီလေးပါသွားပြီနော်…..💕💕💕💕 ဘဲကြီးနာမည်က ထူးပိုင်အောင်ဆိုလားပဲ။မယုံရင်ဝင်ကြည့်လိုက်နော် လုံးဝအံ့သြသွားစေရမယ်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ OMG မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကောင်လေးနဲ့ အိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်တစ်နေ့မှာ သိစေနိုင်မယ့် လက္ခဏာများတဲ့…..မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် အံ့သြသွားစေရမယ်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ MRTV-4 ရဲ့ နာမညျကွီး အစီအစဉျတဈခုဖွဈတဲ့ “ခတျေသဈပြိုမေ” ရဲ့ ပငျတိုငျ Host တဈဦးဖွဈတဲ့ သဇငျနှယျဝငျးဟာ ပရိသတျတှကွေား ရပေနျးစားလှပါတယျ။ Presenter လောကမှာ နာမညျတဈခုရရှိထားတဲ့ …
ဗိုလ်အောင်ဒင်ထက် ပေါက်သွားတဲ့ ချမ်းချမ်း ၊ ဘုဏ်းသိုက် ၊ ရွှေပိုးအိမ်တိုရဲ့ ဇာတ်သိမ်း ထွက်ပေါ်
1 OMG တင်ပါးကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောက်ျားလေးတွေ ကြိုက်တဲ့အကြောင်းရင်း……. မိန်းကလေးတွေနှိပ်ကြည့်လိုက်နော် ယောက်ျားလေးများဝင်မကြည့်ရ……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးမှ အာဏာသုံးပြီးမုဒိန်းကျင့်တာကို ခံခဲ့ရတဲ့ ရွာကကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်နင့်ဖွယ် ရုပ်သံဗွီဒီယိုဖိုင်။စိတ်ခိုင်မှဝင်ကြည့်ပါနော်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား သရုပ်ဆောင် စိုးမြတ်နန္ဒာ၏ကြေညာချက်ကို သရုပ်ဆောင် စိုးသူရဲ့ယခင်ဇနီးဖြစ်သူက ပြန်လည်တုံ့ပြန်……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ကားမီးလောင်မှုမှာ သေဆုံးသူရဲ့အရိုးပြာအိုးကို အိမ်သယ်လာတော့ အိမ်ကလူတွေကို ပူးပြီးပြော……အပြည့်အစုံဖတ်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုဏ်းသိုက်နဲ့ ရွှေပိုးအိမ်နဲ့ ဘာပြုလို့ဆိုလား.. ချမ်းချမ်းက သတင်းစာထဲကနေ ကွာရှင်းလိုက်တယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ ရွှေပိုးအိမ်ကို “စနိုက်ကြော်မ.. ဘာညာ” နဲ့ ဝိုင်းဆဲကြပါလေရော။ ရွှေပိုးအိမ်လည်း မခံနိုင်တော့အဆုံး သူနဲ့ ဘုန်းသိုက် ဘာမှမပြုကြောင်း ဖွဘုတ်ကနေ ဖြေရှင်းတယ်။ …
သရုပ်ဖျက်မှုကြောင့် မြင့်မြတ်ကို တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှန်ထွက်ပေါ်လာပါပြီ…..ဂျင်းကောင်လေး သနားပါတယ်….
ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ရက်နေ့က ရန်ကုန်၊မန္တလေးအပါအ၀င် အခြားသောမြို့နယ်တွေမှာ ပါ တစ်ပြိုင်ထဲ ရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ ကောလိပ်ဂျပိုးဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာ သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်ကို တရားစွဲဆို မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ တရားစွဲဆိုရမယ့် အကြောင်းကလဲ ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာပါတဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ချို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ဝင်ခန်း မှာ သရုပ်ဆောင်မြင့်မြတ်က ပင်နီတိုက်ပုံနဲ့ ယောပုဆိုးကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး ဇာတ်လမ်းအရ မင်းသမီးရဲ့ နောက်ကနေ ပုဆိုးလှန်ပြီး လိုက်နေတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ 1 Oh My God သင်ဇာဝင့်ကျော်အိမ်သာထဲမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတာကြည့်လိုက် အံ့သြသွားစေရမယ်။18နှစ်ပြည်မှကြည့်ပါခင်ဗျာ…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန် စာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား ချစ်သူကို အလိုလိုက်မိတဲ့ ကျောင်းသူလေး ပြည့်တန်ဆာဖြစ်သွားပုံ အဆင့်ဆင့် (မိန်းကလေးတိုင်းအတွက် Share …
အချို့တွေ ၁၀ တန်းမှာ ထစ်နေချိန် နိုင်ငံခြားကနေ ဘွဲ့ယူပြလိုက်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
အချို့တွေ ၁၀ တန်းမှာ ထစ်နေချိန် နိုင်ငံခြားကနေ ဘွဲ့ယူပြလိုက်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မို မင်းသားကြီးလွင်မိုးရဲ့ သမီးချောလေး ယွန်းဝတီလွင်မိုးကတော့ လက်တလောမှာတော့ သြစတြေးလျမှာ ကျောင်းတက်နေပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ(၅)ရက်နေ့တုန်းက သူမရဲ့ fb မှာ “Graduation day” ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံလေးတွေ တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ 1 ဘုရား ဘုရား အမှန်​အကန်​ချတယ့်​အတွဲတဲ့…..ချောင်းရိုက်အချစ်ဇာတ်ကြမ်း…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။….. ကောင်-းလိုက်-တာ-မောင်-ရယ်- လွတ်-လွတ်-လပ်-လပ်-လုပ်ရ-အောင်…မြန်မြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်နော် မကောင်းရင်ငွေပြန်အမ်းပေးမယ်…….ဗွီဒီကြည့်ရန် စာတမ်းလေးကို နှိပ်ပါ။ OMG ပြင်ဦးလွင်ပန်းခြံထဲမှာ ပေါ်တင်ကို ကြမ်းနေကြတာ…တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးအောင်ဆွဲနေတယ်…….ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းကိုနှိပ်ပါ။ ဘုရား ဘုရား နာမည်ကြီးမိုးကုတ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ သူဌေးဒါယိကာမကြီးတို့ရဲ့ လူမသိသူမသိဖောက်ပြန်နေမှု မှတ်တမ်းဗွီဒီယိုဖိုင်……ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်စာကြောင်းလေးကိုနှိပ်ပါ။ ယွန်းဝတီလွင်မိုးဟာ အခုဆိုရင် တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ college foundation ကိုအောင်မြင်သွားပြီလို့ …